Weeraryahankii hore ee Arsenal Kevin Campbell oo arsenal ku booriyey in si rasmi ah ula wareegaan Odegaard. Horyaalka Ingiriiska
Home Horyaalka Ingiriiska Weeraryahankii hore ee Arsenal Kevin Campbell oo arsenal ku booriyey in si...
Weeraryahankii hore ee Arsenal Kevin Campbell oo arsenal ku booriyey in si rasmi ah ula wareegaan Odegaard.
Arsenal ayaa loogu baaqayaa in si rasmi ah ula saxiixato martin Odegaard oo amaah ahaan ula joogo kooxda reer Landon inta ka dhiman xilli ciyaaredka arsenal ayaana fursad u heysata in heshiiska ka dhigaan mid uu kusii nagaanayi garoonka Emarites.
Weeraryahankii hore ee Arsenal Kevin Campbell ayaa taageeraya kooxdiisii hore si ay Martin Odegaard uga soo saxiixdo Real Madrid Campbell ayaa u sheegay Football Insider: “In kasta oo Martin Odegaard uu yahay ciyaaryahan Real Madrid ah waxa uu kooxda joogay lix sano weligiisna isma uusan dhisin.
“Waxaa laga yaabaa inuu doonayo guri iyo xasillooni. Wax dhibaato ah oo xagga luqadda ah kuma lahan Arsenal.
Maxaad guri u raadin weyday? Maxaad si joogto ah ugu biirin? Wuu fiicanyahay. Taasi waa hal shay oo aan ogahay Kaliya wuxuu u baahan yahay madal si uu u muujiyo Waan arki karaa markay wax dhacayaan.
Previous articleThomas Thuchel oo kooxdiisa ugu baaqay ineey lasoo wareegaan Niklas Sule.
Next articleManchester united iyo Man city oo ku dagaalamayaan Kingsley Coman.